TZXDuino: Guddi Arduino ah oo lagu duubay Cajalad loogu talagalay Barnaamijka ZX Spectrum | Qalabka bilaashka ah
Way badan yihiin Retro isticmaalayaasha jecel computer. Aruuriyeyaal sax ah oo maareeya inay iibsadaan ama soo celiyaan qalab hore oo quraafaad ah. Xamaasad ku saabsan Zilog Z80 chips, Apple Classic, ama kuwa kale ee sheeko quraafaad ah ee la soo dhaafay, sida ZX Spectrum, ama Amstrad, Atari, Commodore, iyo in ka badan. Hagaag, dhammaantood waa inay ogaadaan mashruuca TZXDuino ee aan uga hadli doonno qodobkaan.
Qoraalada kale waxaan ku soo bandhignay qormooyin si aan uga soo kabano ciyaaraha fiidiyowga ee fiidiyowga ah oo aan ku dhex galno emulators. Markan waxaan ka hadli doonaa waxa ka jira taasi TZXDuino, maxay ku leedahay Spectrum iyo Arduino, iwm.
2 Waa maxay TZXDuino?
2.1 Si aad u sameysato TZXDuino kuu gaar ah waxaad u baahan doontaa
Shirkadda Ingiriiska Cilmi Baadhista Sinclair wuxuu abuuray mid ka mid ah kombiyuutarada ugu halyeeyga taasna waa wax lala yaabo dadka jecel retro. Waa ZX Spectrum oo suuqa gali lahaa Abriil 23, 1982.
Kombiyuutar 8-bit ah oo ku saleysan microprocessors-ka caanka ah Zilog Z80A. Intaas waxaa sii dheer, waxay noqoneysaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan microcomputers-ka Yurub waqtigan.
Qalab la habeeyay oo aad u kooban oo loogu talagalay waqtiga ka farxin lahaa kombiyuutarka iyo fiidiyowga ciyaarta ee tobankan sano, oo ilaa maanta ah gabal madxaf. Xaqiiqdii, kuwa aan nasiib u yeelan inay haystaan ​​qalabka asalka ah, waxay ku qanacsan yihiin isku-dheelitirro ama emulators si ay u sii nooleeyaan barnaamijyadooda.
ZX Spectrum-ka waxaa jiri doona dhowr nooc, marka lagu daro qaar dhir iyo dheellitir taas oo soo baxday iyadoo la siiyay guusha badeecadan oo ay u jireen dhowr nidaamyo hawlgal oo is waafaqaya.
Sida for qalabka asalka ah, astaamaha ayaa aad loo tixgeliyey waqtiga:
processor: Zilog Z80A oo ah 3.5 Mhz iyo 8-bit oo loogu talagalay baskeeda xogta iyo 16-bit ee baska cinwaanka, isagoo awood u leh inuu maamulo xusuusta badan.
Memoria- Waxaad kala dooran kartaa laba qaabeyn oo kala duwan oo RAM ah. Nooc ka jaban oo ah 16 kB iyo mid ka qaalisan oo ah 48 kB. Taasi waxay ahayd in lagu daro 16 kB ee ROM ee ay ku jirtay saldhig ahaan. ROM-kaas waxaa ku jiray turjubaanka aasaasiga ah.
Keyboard: cinjir ku dhex jira kumbuyuutarka noocyada qaar.
Kaydinta: Nidaamka cajaladda magnet-ka ee la midka ah kuwa loo isticmaalo nidaamka maqalka ee caadiga ah. Xogta waxaa lagu heli karaa xawaare ah 1500 bit / s celcelis ahaan. Sidaa darteed, ciyaar fiidiyoow ah oo qiyaastii ah 48 kB ayaa qaadatay qiyaastii 4 daqiiqo in la raro. In kasta oo cayaaraha qaarkood loo adeegsaday qaabka turbo si loo kordhiyo xawaaraha. Intaa waxaa dheer, sanad kadib markii la bilaabay 'Spectrum', Sinclair wuxuu sii daayay ZX Interface I, oo isku xiri kara ilaa 8 wadayaal cajalad dhakhso ah oo loo yaqaan 'microdrives' oo leh xawaare dhan 120.000 bit / s.
Graphics: Nidaamkeeda muuqaalku wuxuu maamuli karaa shaashadda illaa 256 × 192 px. In kasta oo xallinta midabku ay ahayd 32 × 24 oo keliya, oo leh 8 pi 8 rucubood pixel iyo macluumaad midab ama astaamo ah sida midabka asalka, midabka khadadka, dhalaalka, iyo flash.
Dabcan, dhowr dariiqyada in lagu daro kombuyuutarkan. Kaliya maahan ZX Microdrive, laakiin sidoo kale iskudhafyada kale ee diskiga sida Beta Disk, DISCiPLE, OPUS Discovery, stylus, jiirarka (Kempston Mouse, Star Mouse, AMX Mouse,…), madbacadaha, qalabka ciyaarta ilaaliya sida joysticks, iwm.
Sannadkii 1986, Sinclair Research waxay ka iibin lahayd astaanteeda iyo alaabteeda shirkadda Amstrad, mid kale oo taariikhi ah Laakiin, haddii aadan ogeyn, Sinclair Research Ltd. wali way jirtaa shirkad maanta ...
Iyo waxaas oo dhan oo loogu talo galay riyadii lagu magacaabay Sir Clive Sinclair, hal abuure degan London, injineer iyo ganacsade lahaa fikradan cajiibka ah inuu ku iibiyo microcomputers guriga. Iyo waxa ugu fiican ee ah inaad ku sii raaxeysan karto iyaga mashaariicda sida TZXDuino ee aan hoosta kugu tusinayo ...
Waa maxay TZXDuino?
Waa run inaad haysato emulators gacantaada, sidoo kale inaad iibsato ama dib u soo ceshato qalabkii asalka ahaa ee 'Spectrum' ee aad ka heshay suuqa gacanta labaad naftaada. Habkaas, waxaad heli doontaa qalab aad ku socodsiiso ciyaaraha fiidiyowga ee Retro iyo softiweer sidii hore. Laakiin qof walba ma heli karo mid, waana halkaan TZXDuino waxay qaadataa muhiimaddeeda.
Hagaag, qiyaasi xero u eg cajalad cajalad ah, oo ay ku jiraan guddi horumarineed oo awood u leh inay ku shaqeeyaan barnaamijyada asalka ah ee ZX Spectrum ee aad ku keydisay a kaarka microSD. Taasi asal ahaan waa waxa aad lahaan lahayd TZXDuino. Ma haysato qalab asal ah, laakiin wax waa wax haddii aadan jeclayn emulators ...
Kuwa ka masuulka ah mashruucan ayaa ah Andrew Beer iyo Dunan Edwards, oo leh berri iyo male-awaal ay ku guuleysteen inay wax walba ku ridaan cajalad cajalad ah. Marka waxaad ku haysan kartaa gacmahaaga qalab yar si aad dib ugu soo nooleyso dhammaan barnaamijyadaas quraafaadka ah ee 80-meeyadii ilaa 90-meeyadii loogu talagalay Spectrum.
Haddii aad la yaabban tahay faahfaahinta farsamo ee sida loo abuuray, runta ayaa ah inay jireen ku saleysan arduino. Sidaa awgeed magaceeda. Hadana hadaad mid rabto oo aad leedahay nafta qof sameeye, waad awoodaa samee cajalad kuu gaar ah oo DIY ah. Xiriiriyahaan waxaad kaheleysaa PDF oo kakooban dhamaan tilmaamaha iskuxirka qaybaha elektaroonigga ah. Runtuna waxay tahay inaysan ahayn nidaam aad u adag oo dheer ...
Waxa kaliya ee isku dhafan ee ay leedahay waa inay u baahan tahay xoogaa xirfad ah oo wax kasta oo gudaha ah dhexgaleysa iyo inaad fiicantahay xirfadaha alxanka daasadda.
Si kastaba ha noqotee, waan hubaa wax badan ayaad baraneysaa inta hawshu socoto dhismaha iyo baashaalka mar la uruuriyo ayaa la damaanad qaadayaa ...
Si aad u sameysato TZXDuino kuu gaar ah waxaad u baahan doontaa
Waxaad awoodi kartaa iibso dhammaan qaybaha si fudud dukaamada khaaska ah ama Amazon, sida:
Module aqristaha kaarka MicroSD
Saxan dalool leh
PAM8403 2X3W Guddiga Kordhinta
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » TZXDuino: loox Arduino ah oo ku jirta cajalad loogu talagalay barnaamijka ZX Spectrum
Mashiinka korantada: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
ASUS Tinker Board: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato